Myanmar to attract more FDI into the pharmaceutical sector in the future | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar to attract more FDI into the pharmaceutical sector in the future
Myanmar to attract more FDI into the pharmaceutical sector in the future
Based on the experiences during the COVID-19 pandemic, Myanmar plans to attract more foreign direct investments into the pharmaceutical sector as well as the agriculture and livestock sector.
“We will invite investments into the pharmaceutical sector to produce mask, PPE and hand gel,” U Thant Zin Lwin, Director General of the Directorate of Investment and Company Administration, said.
Now, the country has received investment proposals into the livestock sector, the agricultural sector, and the industrial sector.
As of May 2019-2020 fiscal year since the 1988-98 fiscal year, the total foreign direct investments into the country are $85 billion. In the first eight months of the 2018-2019 fiscal year, the country received $4.102 billion of FDI compared to $4.158 billion in the 2017-2018 fiscal year.
To cope with the COVID-19, the country borrowed $1.25 billion from international organizations and countries: $270 million from Japan, $700 million from IMF, $30 million from ADB, and $250 million from the World Bank.
Written by Tayzar Bhone Myint/ Translated by Min
COVID – 19 ဖြစ်ပြီး အတွေ့အကြုံအနေအထား ပေါ်မူတည်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သော နိုင်ငံခြားရင်နှီးမြှုပ်နှံမှု မျိုးကိုဆွဲဆောင်ရန်စီစဉ် ထားကြောင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးသန့်ဇင်လွင်က ပြောသည်။
“အများလူသိများ နှာခေါင်းစည်းတို့၊ PPE တို့၊ hand gel စတဲ့ ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးသန့်ဇင်လွင်ကပြောသည်။
ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ စတုတ္ထ(၁)နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း အခမ်းအနားတွင်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအပြင်လယ်ယာကဏ္ဍ၊ သားငါးကဏ္ဍ၊ စက်မှုဇုန်ကဏ္ဍ တို့ကိုလည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် ဆွဲဆောင်မည်ဖြစ်ကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် အဆိုပြုချက်များ ရှိကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID – 19 ဖြစ်လာသောအခါ ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်၊ ထိန်းချုပ်ရန် ကိစ္စများတွင်လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ရာစီးပွားရေးကုစားရန်ငွေကြေးလိုအပ်ခဲ့ရာနိုင်ငံတကာမှချေးငွေများယူခဲ့ရသည်။
“နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေဆီက အတိုးနှုန်းသက်သာတဲ့ ချေးငွေတွေ ရယူဆောင်ရွက်ရပါတယ်” ဟု ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
COVID – 19 အတွက်ဂျပန်မှ ယမ်း ၃၀ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာအားဖြင့်သန်း ၂၇၀)၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၇၀၀၊ ADB ကသန်း ၃၀၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှသန်း ၂၅၀ ချေးယူထားကာ သန်းပေါင်း ၁၂၅၀ ခန့်ရှိကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးရုံများ ICU များ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ချေးငွေများရယူ ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်းလည်းသိရသည်။
၁၉၈၈ − ၈၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ − ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မေလအထိနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြူပ်နှံမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၅ ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၉ − ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမရှစ်လ အတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြူပ်နှံမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၁၀၂ ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၈− ၁၉ ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြူပ်နှံမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၁၅၈ ဘီလီယံ ရှိခဲ့သည်။
Previous articleSingapore’s Ascent Invests $26 Million in Frontiir
Next articleMyanmar, corn exporter, might need to import corn